‘पटलक’ एकचोटी चाख्ने कि ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
‘पटलक’ एकचोटी चाख्ने कि ?
प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन ११, २०७४
प्रल्हाद गैरापिप्ली । काठमाडौं । प्रसन्न मुद्रामा देखिएका मानिसहरुका हात अगाडि टेवलमा सजाएर राखिएका मिष्ठान्न परिकारहरुले गर्दा सल्बलाईरहेका छन् । आफुले बनाएर ल्याएको परिकारमा सहकर्मीहरुको आँखा परोस् र मुख रसाएर आओस् भन्नेमा सबै उत्सुक पनि देखिएका छन्, सँगै आफूले तुल्याइबनाई गरेर ल्याएको परिकारप्रति साथीहरुको कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो भन्नेप्रति सचेत पनि छन् । कुनै एक कार्यक्रममा देखिएको यो दृश्यले कतै सामुहिक भोजनको परिवेश दर्शाईरहेको थियो भने कतै ‘सुख्खा बनभोज’ को झलक दिईरहेको थियो । तर, यो भोजनको कौतुहलता जोडिएको विषय भनेको “पट्लक” हो ।
पट्लक एउटा यस्तो सामुहिक भोजन गर्ने परम्परा हो, जसमा सहभागिहरुले आफ्नै भोजन सामग्री लिएर उपस्थिति हुन्छन् र साझा रुपमा भान्छा गरिन्छ । यो प्रचलन पश्चिमी मुलुकबाट भित्रिएको भए पनि यसले नेपाली परम्परागत शैली तथा ऐचोपैंचो र साझेदारीको भावना समेतलाई कदर गरेको छ ।
खाना जीवनको पहिलो आवश्यकता पनि हो । झनै हाम्रा हरेक मौलिक संस्कृति तथा चाडपर्वहरुमा विषेश खानेकुराहरुको छुट्टाछुट्टै महत्व छन् । यसका अलावा पट्लक परम्पराको लागि कुनै पर्वलाई पनि कुर्नु नपर्ने भएको र एउटै मञ्चमा सहभागिहरुले आफ्नो विषेश रुचीको परिकार ल्याउन सक्छन् । कुनै पनि कार्य समूहका सदस्य तथा कार्यालयका कर्मचारीहरु बीच सामाजिकीकरण तथा आत्मियताको भावना विकास गर्न समेत यसले भूमिका खेल्न सक्छ ।
हुनत यो अभ्यास हाम्रो समाजमा विलकुल नयाँ भने होइन । हाम्रा गोठाला र मेलापातमा साथीभाई र दिदीबहिनीले भुटेको मकै, गहँु, पीठो फलफूल, नुनखुर्सानी र मोही लगेर पनि साटासाट गरी खान्थे । तर आजको समयमा यस्ता मौलिक संस्कृतिहरु ओझेलमा पर्दै गएको समयमा पट्लक प्रतिको मोह शहरी परिबेशमा पनि सुहाउँदो देखिन्छ ।
खानासँगै विचार र भावना पनि प्रवाह हुन्छ भन्ने पूर्वीय दर्शनको मान्यतालाई पट्लकले समेत आत्मसात गर्छ । हरेक समयमा बाहिर होटल, रेष्टुरेन्ट तथा क्याफेमा खाना र नास्ता खानु शहरी समुदायको एउटा बाध्यता पनि हो । अझै यसमा खाद्य गुणस्तर, स्वच्छता र सरसफाइको अवस्था समेत कति समयमा त चुनौति नै बनेको छ । अतः स्वास्थ्य र सामाजिकतालाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने सहज उपायका रुपमा पनि पट्लकलाई लिन सकिन्छ ।
अनुकुल मिलेसम्म कार्यालयका सहकर्मीहरु संग घरैमा आफ्नै मौलिकता, श्रद्धा, प्रेम र सिर्जनात्मक शैलीमा बनेका भोजन समुहमा साटासाट गर्दै एकपटक पट्लक आयोजना गरि हेर्ने कि !
कमेडी भण्डार सहित ‘सुश्री सम्पत्ति’ ट्रेलर सार्बजनिक !! भिडियो सहित हेर्नुहोस